काठमाडौं उपत्यकामा बढेन जग्गाको मूल्याङ्कन, कहाँ कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं: काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रका जग्गाको मूल्यांकन पुरानै कायम भएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा गठित समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि जग्गाको नयाँ मूल्याङ्कन गरेको छ ।
कोरोना भाइरसले समग्र क्षेत्रमा असर परेको भन्दै समितिले अधिकांश क्षेत्रको न्युनतम् मूल्याङ्कनमा परिवर्तन गरेको छैन । केहि क्षेत्रको थोरै बढाईएको छ ।
काठमाडौंका पनि अधिकांश क्षेत्रको जग्गाकाे मूल्यांकन गत आवकै कायम गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार कम भयो भन्ने गुनासो आएका क्षेत्रहरुको बढाइएको छ बाँकी क्षेत्रको पहिलेकै मुल्यांकन राखिएको छ ।
राजश्वको लागि मात्र मूल्यांकन !
‘तर, यो मूल्याङ्कनअनुसार जग्गा पाइँदैन’, दाहाल भन्छन्, ‘यो त राजस्व तिर्नका लागि मात्र हो ।’ अनलाइन खबरबाट साभार
ट्याग्स: काठमाडौं उपत्यका, कोरोना भाइरस, जग्गा